बिरुवाटारमा प्रहरी चौकी स्थापना, अब बैंक चाहियो – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७५, ७ कार्तिक बुधबार ०६:५१
रविन्द्र कंडेल, कार्तिक७
पालुङटार वडा नं. ७ को विरुवाटारमा आज अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको छ । प्रहरी चौकी स्थापना संगै अपराधिक गतिविधी कम हुने विश्वासमा स्थानीयहरु खुसी भएका छन् ।
यसअघि यस स्थानमा प्रहरी चौकी नहुँदा प्रहरी ठाँटीपोखरीबाट डुम्रे नयाँपुल हुुँदै बिरुवाटारसम्म आइपुग्नुपर्दा स्थानीयहरु मर्कामा परेका थिए । बिभिन्न बैंकहरुले शाखा स्थापनाको लागी चासो देखाइरहेको भएता पनि चौकी नहुँदा सुरक्षा नहुने भन्दै आउन नसकेको वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभएको थियो भने अव बैंकको शाखाहरु पनि आउने सम्भावना बढेको उहाँले बताउनुभयो । चौकी नहुँदा नगरपालिकाको ठूला वडाहरुमध्येमा पर्ने यस वडामा हालसम्म एउटा पनि बैंकको शाखा समेत आउन सकेको छैन । बैंक शाखा नहुँदा यस स्थानका बासिन्दाहरुलाई आर्थिक कारोबार गर्न समेत निकै कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ स्थानीय विकास परियार ।
उहाँका अनुसार बैंक शाखा नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी समेत निकै कठिनाइ भइरहेको छ । बृद्धबृद्धाहरु डुम्रेसम्म पुग्न कठिन, पुगिहाले पनि जाँदा आउँदा अनावश्यक खर्च र झन्झट भइरहेका समेत बताउनुभयो ।
अस्थायी प्रहरी चौकी उदघाटनको क्रममा गोरखा जिल्ला पालुङ्टार नगरपालिकाकी उप प्रमुख पम्फा बसेल, वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष बसन्त कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख एस.पी. बिमल वस्नेत, इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटीपोखरीका प्रहरी निरीक्षक रोशनराज पाण्डेय लगायतका व्यक्तिहरुले चौकी स्थापनासंगै विकासको बाटो खुला भएको बताएका थिए ।
हाल १ बर्षका लागी पालुङ्टार नगरपालिका कार्यालयले भाडा तिर्ने गरी स्थानीय नवीन कुमार श्रेष्ठको घरमा चौकी स्थापना गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नगर उप प्रमुख पम्फा बसेलले यस चौकीलाई स्थायीमा परिणत गर्न सवै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही क्रममा अव न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा पनि यस वडामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने प्रहरीले निश्पक्षताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै गरी वडाध्यक्ष वसन्त कुमार श्रेष्ठले आफूहरुले चौकी स्थापनाको लागी धेरै अघिदेखि पहल गरेको र हाल चौकी स्थापना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । सोही अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख एस.पी. विमल वस्नेतले यस कार्यालयको स्थायित्वको लागी स्थानीयबासीहरु सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो भने जनता र प्रहरीबीचको सामीप्यता जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नको लागी जनता र प्रहरी बीचको सामीप्यता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
यस स्थानमा चौकी स्थापनाको लागी ३ महिनाअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोररखाका एस.पि. विमल वस्नेत लगायतकाको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी छिटै चौकी स्थापना गर्ने बचन दिएलगत्तै चौकीको लागी घरको व्यवस्था गरिएको थियो । हाल यस चौकीमा अ.स.इ.को नेतृत्वमा ५ जना रहने र पछि आवश्यक परे अरु थप गरिने इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटीपोखरीका इन्चार्ज रोशनराज पाण्डेले बताउनुभयो ।
चौकी स्थापनासंगै अब बैंक पनि आएर भत्ता लिन डुम्रे जानु नपरे हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ स्थानीय जेष्ठ नागकि भक्त कुमार श्रेष्ठ । अब बैंक शाखा समेत आई रेमिट्यान्स लगायतका कारोबार समेत यही स्थानबाट सञ्चालन गर्न सके अझ सजिलो हुने र विकासको लागी अवसरहरु खुल्ने स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
दशैंमा आगलागी, वडाध्यक्षको टौवासमेत जलाइयो ।
दशैंका टीकाको भोलिपल्टको रातमा यस वडामा ३ वटा परालको टौवामा र एक जनाको धानको कुन्युमा आगलागी भएको छ । वडाध्यक्षको घरनजिकै रहेको उहाँको परालको टौवामा समेत आगलागी भएको छ । रातको समयमा यसरी ४ ठाउँमा आगलागी हुनुका साथै बिरुवाटारमा रहेको लिङ्गेपिङमा समेत आगो लगाइएको छ । एकै रातमा आगोलागी भएको हुँदा कुनै एउटै समूह वा व्यक्तिले लगाएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । शंकास्पद केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान पछि छाडिएको इलाका प्रहरी कार्र्यालयका प्रमुख रोशनराज पाण्डेले बताउनुभयो ।